အခနျ့မသငျ့ရငျ – My Blog
ကနြျော ငယျငယျတုနျးကပေါ့ဗြာ..။ ကနြေျာ့ အိမျမှာ အပျခြုပျစကျလေးတဈလုံး ရှိတယျဗြ..။ အရငျတုနျးက ရယျဒီမိတျတှထေကျ ခြုပျဝတျကွတဲ့ခတျေဆိုတော့ အမကေ ကိုယျတိုငျလညျးခြုပျတတျနတေော့ စကျဆိုငျ မအပျတော့ဘဲ ကိုယျတိုငျခြုပျတယျ။ အဈမလညျး အစက ဘေးကဝိုငျးကူရငျး တဖွညျးဖွညျးနဲ့ သူလညျး ကိုယျတိုငျ ခြုပျတတျသှားတယျ..။ ဆိုတော့ကာ အပျခြုပျစကျလေးက အမကေ သုံးလိုကျ အဈမက သုံးလိုကျနဲ့ အိမျလေးထဲမှာ ဂြောကျဂကျြ ဂြောကျဂကျြနဲ့ နတေို့ငျးနီးပါး မွညျနတေတျတယျ။ ကနြျောကလညျး ခြာတိတျပေါကျစအရှယျဆိုတော့ အဲဒီ ဂြောကျဂကျြ ဂြောကျဂကျြမွညျသံကွီးကို စိတျဝငျစားပွီး အမနေဲ့ အဈမတို့ အဝတျခြုပျနတေိုငျး အပျခြုပျစကျနားမှာ ရှိနတေတျတယျ..။ အပျခြုပျစကျရဲ့ ခွနေငျးကို နငျးလိုကျတိုငျး ဘေးက အဝိုငျးကွီးလညျနတောကို ကွညျ့ပွီးလညျး သဘောတှကေလြို့….။
နောကျပိုငျးလညျးကရြော အဖကေ အရုပျတှေ ခဏခဏဝယျပေးတော့ အာရုံက အရုပျတှဆေီမှာဘဲ ရှိတော့တယျ..။ ဂြောကျဂကျြဂြောကျဂကျြ မွညျပွီး အဝိုငျးကွီးလညျလညျနတေဲ့ အပျခြုပျစကျနား သိပျမရောကျဖွဈတော့ဘူး..။ ကနြျောလညျး ကြောငျးတှပွေီးလို့ အလုပျတှလေုပျလိုကျ အခှငျ့အရေးပိုကောငျးတဲ့ အလုပျပွောငျးလိုကျနဲ့ အခုပွောငျးလာတဲ့ အလုပျက နပွေညျတျောကို ခဏခဏသှားရတယျ..။ နပွေညျတျောမှာ ရုံးခှဲရှိပမေယျ့ ရုံးထိုငျပေးမယျ့ လူမရှိတော့ တဈလ တဈခါလောကျ ကိုယျစားသှားသှားနပေေးရတယျ..။ ရုံးက နဲနဲကပျစေးကတြော့ ရုံးကားလညျးမပေးဘူး..။ အမွဲတမျး အဝေးပွေးကားကွီးတှနေဲ့ဘဲ ခရီးထှကျရတယျ..။ နပွေညျတျောရောကျမှ အဲဒီရုံးက ကားကို ယူသုံးရတယျ..။ ပွီးတော့ ရုံးခှဲက နပွေညျတျောမှာ ဆိုပမေယျ့ တညျးရမယျ့ ဟိုတယျက ပဉျြးမနားမွို့ထဲမှာဆိုတော့ ဆငျရုပျကွီးနားမှာ ဆငျးပွီး ဟိုတယျကို အေးအေးဆေးဆေး လမျးလြှောကျနကြေ..။ အခုတဈခေါကျလညျး လမျးလြှောကျပွီး ဟိုတယျကို သှားနတေုနျး ဘေးနားကို ကားတဈစီးက အရှိနျဖွေးဖွေးလေးနဲ့ ကပျလာတယျ..။
ကားမောငျးသူဘကျက ကားမှနျအနကျရောငျလေးက အောကျကို လြှောကသြှားပွီး…. “မောငျလေး…နှငျးဆီအဝိုငျးကို ဒီကနေ ဘယျလိုသှားရလဲ ??” အသံပိုငျရှငျကို စူးစမျးလိုကျတော့ မိနျးမတဈယောကျ….။ ရုပျကသိပျတော့မလှပမေယျ့ ဆှဲဆောငျမှုတော့ရှိတယျ…။ နှာတံစငျးစငျး ပါးဖောငျးဖောငျး မေးခြှနျခြှနျလေးနဲ့ နှုတျခမျးလေးက တှဲတှဲလေး… မိတျကပျကာလာ သိပျမပါတဲ့ မကျြနှာက နညျးနညျး ဆကျဆီ တော့ ဖွဈတယျ…။ “မောငျလေး သိလား…” သူ့မကျြနှာကို သရုပျခှဲနတေဲ့ ကနြေျာ့ကို အသိပေးသလို ထပျမေးလိုကျမှ ကနြျောလညျး လိုရငျးကိစ်စအပျေါ အာရုံပွနျရောကျတော့တယျ။ သူက အကူအညီတောငျးတဲ့သူဆိုတော့ မကျြနှာလေးကို ပွုံးထားရှာတယျ..။ “ဒီကနေ ရှဆေ့ကျသှားပွီး ……..” “သွျော….သိပွီ ….” ကြေးဇူးဘဲ မောငျလေးလို့ပွောပွီး ထပျပွုံးပွသှားတဲ့ မကျြနှာလေးက ကားမှနျအနကျရောငျနောကျကို ရောကျသှားတဲ့အခြိနျ ကနြျောလညျး သူ့အပွုံးကို ငွိသှားတယျ..။ ကနြေျာ့ ဖေးဘရိတျဖွဈတဲ့ သှားတကျလေးတှေ သူ့မှာ ပိုငျဆိုငျထားတယျလေ..။
သူ မောငျးလာတဲ့ကားက ထှကျသှားပမေယျ့ ကနြျောက လမျးဘေးမှာ ကနျြနခေဲ့တုနျး…။ သူ့မကျြနှာလေးကို ပွနျမွငျယောငျရငျး အောကျက ညီလေးက ထောငျထလာတယျ..။ မဖွဈသေးပါဘူး….. လမျးမအလယျကွီးမှာ ဘောငျးဘီခှတညျ့တညျ့က ဖုဖုဖောငျးဖောငျးနဲ့ လောငျတီးနတော လူတှမွေငျကုနျရငျ ရှကျစရာ…။ လကေို ပါးစပျကနေ ခဏခဏမှုတျထုတျလိုကျတော့မှ ညီလေးက ပွနျကတြယျ။ အဲဒီတော့မှ ဟိုတယျကို ဆကျလြှောကျနိုငျတော့တယျ…။ ဟိုတယျရောကျတော့ အခနျးယူပွီး ခဏနားလိုကျတယျ။ ပွီးမှ ရမေိုးခြိုးပွီး ရုံးကားကို လာကွိုခိုငျးလိုကျတယျ…။ ရုံးမှာ ဟိုလုပျသညျလုပျနဲ့ နလေ့ညျကြျောတော့မှ မနကျကတညျးက ဘာမှ မစားရသေးမှနျး သတိထားမိတယျ…။
အဲဒါနဲ့ တဈနစေ့ာ ဖွတျစရာရှိတာ ဖွတျပေးပွီး ရုံးကားပါတဈခါတညျးယူရငျး ရုံးဆငျးခဲ့လိုကျတယျ..။ သပွကေုနျးဘကျက ဆိုငျတဈဆိုငျမှာ စားသောကျပွီး ဈေးထဲက ညီဝမျးကှဲ ဖှငျ့ထားတဲ့ဆိုငျကို ထှကျလာခဲ့လိုကျတယျ..။ သူက ပဉျြးမနားသူနဲ့ အိမျထောငျကပြွီး သပွကေုနျးဈေးထဲမှာ ပဉျြးမနားလကျဆောငျနဲ့ ကုနျစုံဆိုငျကွီး ဖှငျ့ပွီး အခွကေနြလေရေဲ့…။ သူနဲ့ ထှရောလေးပါး စကားပွောနတေုနျး ဈေးဝယျတှရေောကျလာတော့ ညီဝမျးကှဲက ဈေးထရောငျးတယျ..။
အဲဒီအခြိနျမှာဘဲ ကောငျမလေး သုံးယောကျ ဆိုငျရှကေို့ ထပျရောကျလာပွီး ဟိုဟာ ဒီဟာ လကျညှိုးထိုးပွီး မုနျ့တှေ မှာနတေော့ ညီဝမျးကှဲက လကျမလညျတော့ဘူး…။ ကနြျောလညျး မနနေိုငျတော့တာနဲ့ ဈေးကူရောငျးပေးလိုကျတယျ…။ ကောငျမလေးတှေ ဝယျတာ တျောတျောမြားတယျ…။ ကွကျသှနျပေါငျးကွျောထုပျတှေ နဲတာမဟုတျဘူး..။ နနျးစိနျကိတျတှလေညျး အမြားကွီးဘဲ..။ လာဝယျတဲ့ကောငျမလေးတှကေလညျး ခပျမိုကျမိုကျ ဆယျကြျောသကျ ၁၇ ၁၈ အရှယျလေးတှေ…။ ညီဝမျးကှဲက ပွနျရောငျးဖို့လား မေးတော့ မဟုတျဘူး လကျဆောငျပေးဖို့လို့ ကောငျမလေး တဈယောကျက ပွနျဖွတေယျ..။
ပိုကျဆံလညျး ရှငျးပွီးရော မုနျ့တှေ တအားမြားတော့ ကောငျမလေးတဈယောကျက ကားပါကငျဘကျကို ပွနျထှကျသှားပွီး ပွနျလာတော့ အဖျောတဈယောကျထပျပါလာတယျ…။ ကောငျမလေးနဲ့ ပါလာတဲ့ တဈယောကျကို ကနြျော မွငျလိုကျတော့ ဟတျခနဲ စိတျလှုပျရှားသှားတယျ…။ ခငျဗြားတို့ တှေးမိတဲ့ အတိုငျးပါဘဲ မနကျက ကနြေျာ့ကို လိငျစိတျကွှစခေဲ့တဲ့ ဆကျဆီ မကျြနှာပိုငျရှငျ..။ အခုတဈခေါကျ ထပျမွငျလိုကျရတော့လညျး စိတျတှကေ ပွနျကွှခငျြလာတယျ။ တကယျ့ အဖွဈအပကျြတှကေ တဈခါတဈလေ ဇာတျလမျးဆနျတတျတာကို ကနြျော လုံးဝ လကျမခံခဲ့ပမေယျ့ အခုတော့ တကယျဖွဈနပွေီ…။ ကံကွမ်မာက ကနြေျာ့ကို ကြီစားနပွေီလား မသိဘူး…။ ကနြျောလညျး မုနျ့တှကေို အိတျတှနေဲ့သာ ထုပျပေးနတော အကွညျ့တှကေ သူ့ဆီ ရောကျရောကျနတေယျ..။
မကျြနှာက ဆကျဆီ ကသြလို ကိုယျလုံးကလညျး လုံးဝအကိတျ..။ ခှနျးဆငျ့နခွေညျလို ဘျောဒီမြိုး…။ တငျသားကွီးတှကေ အနောကျကို ကော့ပွီး ကောကျနတော ရှယျဗြာ..။ အပျေါက အဖွူရှပျ အပှကို ဝတျထားတော့ ရငျသားတှကေ သိပျမသိသာပမေယျ့ ဆိုဒျကွီးမယျ့ပုံဘဲ…။ ခကျတာက အဲ့ဒီ အမြိုးသမီးက ကနြေျာ့ကို မှတျမိပုံ မပျေါဘူး…။ ဒါနဲ့ မုနျ့တှေ ထညျ့ထားတဲ့ အိတျကို သူ့ကို ကမျးပေးရငျး ကနြျောလညျး ပွုံးပွလိုကျပွီး “အဈမ..မနကျက ကနြျော လမျးပွောပွလိုကျတာ အဆငျပွလေားဗြ…” အဲဒီတော့မှ သူ့မကျြလုံးက ဝိုငျးသှားပွီး အံ့သွသှားတဲ့ အမူအရာနဲ့ ကနြေျာ့ကို မှတျမိသှားတယျ..။
“သွျော အဟငျး.. အဆငျပွတေယျ မောငျလေး..။ ဒါက မောငျလေး ဆိုငျလား ?…” “မဟုတျဘူး အမ..။ ကနြေျာ့ ဝမျးကှဲ ဆိုငျပါ…။ ကနြျောက ရနျကုနျကပါ…နပွေညျတျောမှာ ရုံးကိစ်စရှိလို့…ကနြေျာ့နာမညျ..…….” နာမညျဘာညာ မိတျဆကျပွီးတော့ လိပျစာကဒျလေး ထုတျပေးလိုကျတယျ…။ ကဒျကို တဈခကျြ ကွညျ့လိုကျပွီး “…… တှေ လုပျတာလား…. အမတို့ ရုံးက ရနျကုနျမှာလညျး ရှိတယျ..” “ဟုတျကဲ့ အမ…. အမတို့ ရုံးမှာ လိုအပျရငျ ဖုနျးဆကျလိုကျပါ…အဆငျပွအေောငျ စီစဉျပေးပါ့မယျ …..” ဘာညာကှိကှ အလုပျကိစ်စနဲ့ စကားတှပွေောပွီး သူလညျး အထုပျတှဆှေဲပွီး ကားပါကငျကို ပွနျသှားတယျ..။ အဲ့ဒီ အမက ကနြေျာ့ ကဒျသာ ယူသှားတာ သူ့ ကဒျကတြော့ ပွနျမပေးသှားဘူး..။ ရုံးက လူတှကေို ဆကျသှယျခိုငျးလိုကျမယျဘဲ ပွောသှားတယျ..။
အခုထိ နာမညျတောငျ မသိလိုကျရပမေယျ့ အဲ့ဒီအမရဲ့ နောကျပိုငျး အလှနဲ့တငျ တျောတျောကို တနျပါတယျဗြာ…။ ကားပါကငျဘကျကို ပွနျသှားတဲ့ အခြိနျ လမျးလြှောကျသှားတိုငျး တငျပါးကွီးတှကေ ငွိမျ့ခနဲ ငွိမျ့ခနဲ လှုပျလှုပျသှားတာ အနားပွေးကပျပွီး အားရပါးရ ညှဈပဈခငျြစိတျတှတေောငျပေါကျတယျ..။ ဒါမြိုး စျောကွီးကို ဖွညျလိုကျရရငျတော့ ပဈြနှဈနမှောဘဲ…။ ကာမပိုငျ ရှိမှနျးမသိ မရှိမှနျးမသိ အားပါးတရ ပွဈမှားလို့ ဝတော့မှ ဆိုငျထဲကို ပွနျဝငျလာတော့ ညီဝမျးကှဲက စပျဖွီးဖွီးနဲ့ မကျြခုံးပငျ့ပွပွီး… “တောငျ့တယျနျော….” “အငျး…တျောတျော တောငျ့တယျ…” ခကျတော့တာဘဲ…. စိတျက ခုနက စျောကွီးဆီဘဲ ရောကျရောကျနတေယျ…။ တဈခါမှ ဒီလို မဖွဈဖူးသေးဘူး…။ ရညျးစားလညျး ထားဖူးတယျ…။
စျောတှလေညျး ဖွုတျဖူးသားနဲ့ ဒီမိနျးမနဲ့ကမြှ ဘယျလို ဖွဈတယျကို မသိဘူး..။ သူ့ကို တှရေ့ငျ စိတျတှကေ ထထ လာတယျ..။ မယုံမရှိနဲ့ဗြ….ခငျဗြားတို့ အပွငျမှာ တကယျတှရေ့ငျ ကနြျောလိုဘဲ ဖွဈမယျဆိုတာ ကွိမျးသတေယျ..။ ဟိုတယျကို ပွနျလာရငျး ကားမောငျးလာတော့လညျး မကျြလုံးထဲ စျောကွီးကိုဘဲ မွငျမွငျနတေယျ…။ အသားက အဖွူကွီး မဟုတျပမေယျ့ ဝါဝါဝငျးဝငျးလေး…။ ဘျောဒီအခြိုးအစားကလညျး ပွဈပွကျလုပျပဈလိုကျရငျတောငျ တောငျ့ခံနိုငျတဲ့ အမြိုးအစား…။
ဟူးး မဖွဈတော့ဘူး ဓါတျကွမျးတိုကျမှ ဖွဈမယျ…။ စားလညျး ဒီစိတျ သှားလညျး ဒီစိတျနဲ့ဆို ကွာရငျ ခကျမယျ…။ ဖုနျး contact ထဲက နာမညျတဈခုကို နှိပျရငျး ဖုနျးချေါလိုကျတော့ ဟိုဘကျက ဖုနျးခကျြခငျြး လှမျးကိုငျတယျ..။ “ဟဲလို…ကိုကွီး…ရောကျနပွေီလား” “၉နာရီလောကျ လာခဲ့မယျ…” “အငျး…မြှျောနမေယျနျော ကိုကွီး…..” ဟိုတယျပွနျရာကျတော့ ဘယျလိုမှ မနနေိုငျတာနဲ့ ဂှငျးတဈခြီထုပွီး တဈရေးအိပျလိုကျတယျ…။ တဈရေးအိပျပွီး နိုးလာတာနဲ့ ရခြေိုး အဝတျအစားလဲပွီး ခုနက ဖုနျးကိုငျတဲ့ ကောငျမလေးဆီ ထှကျလာခဲ့လိုကျတယျ…။ သူ့ နာမညျက ကသေရီ…။ အသားညိုညိုနဲ့ ရငျသားတှေ ထှားသလောကျ ခါးက သိမျသိမျလေးနဲ့ အပေးအရမျးကောငျးတယျ…။ နပွေညျတျောကို စစရောကျခငျြး နှဈခေါကျလောကျမှာ နယျခံ တဈယောကျက ခြိတျပေးတာ…..။ နောကျပိုငျး ကနြျောလညျး သူ့ဆီမှာ ခဏခဏ အားပေးဖွဈတော့ ဖုနျးနံပါတျတောငျ အလှတျရနပွေီ…။
ကသေရီနတေဲ့ လမျးထိပျရောကျတော့ သူက ထှကျစောငျ့နတေယျ…။ အဲဒါနဲ့ သူ့ကို ကားပျေါချေါတငျပွီး ဟိုတယျကို ပွနျမောငျးလာခဲ့တယျ..။ ကားပျေါမှာ ကသေရီရဲ့ ရမှေေးနံ့က မှေးနတောဘဲဗြာ..။ ကားမောငျးရငျး ကသေရီကို လှညျ့ကွညျ့ လှညျ့ကွညျ့နဲ့ ညီလေးက မတျလာရော..။ ဘေးတိုကျ မွငျနရေတော့ ကသေရီရဲ့ နို့အုံ ထှားထှားကွီးက ဖွဈညှဈခငျြစိတျတှေ တားမရဆီးမရဘဲ။ မနနေိုငျတော့တာနဲ့ ကသေရီ လကျကို ယူပွီး ညီလေးပျေါ တငျထားခိုငျးလိုကျတယျ…။ ကသေရီကလညျး အလိုကျသိပါတယျ တဈလမျးလုံး ဖွညျးဖွညျးလေး ဂှငျးတိုကျလာပေးတယျ…။ သူက ညီလေးကို ခြော့လေ စိတျတှကေ ကွှလာလနေဲ့ လီဗာကို ခငျပွငျးပွငျးနငျးပွီး ဟိုတယျကို ရောကျအောငျ ခပျမွနျမွနျလေး မောငျးလိုကျတယျ…။ ဟိုတယျ အခနျးထဲ ရောကျတာနဲ့ လူက လုံးဝ မထိနျးနိုငျတော့ဘူး..။ ကသေရီကို အတငျး ဖကျနမျးပွီး ကုတငျစောငျးမှာ လေးဘကျကုနျးခိုငျးလိုကျတယျ…။
ခရီးဆာငျအိတျထဲ အမွဲဆောငျထားတဲ့ ကှနျဒှနျကို ခပျမွနျမွနျလေး စှပျပွီးတာနဲ့ တဈခါတညျး တနျးထညျ့လိုကျတာဘဲ..။ စစခငျြး နဲနဲတော့ ကွပျပမေယျ့ လူက မှနျနတေော့ ခပျသှကျသှကျဘဲ ဆောငျ့လိုကျတယျ…။ ကသေရီကတော့ စစခငျြး မနှူးဘဲ တနျးထညျ့လိုကျလို့လားမသိဘူး..။ နာလို့ထငျတယျ မှရေ့ာခငျးကို လကျနဲ့ ဆုပျထားရငျး တအားအား အျောနတေယျ..။ နောကျပိုငျး အခကျြရေ မြားလာတော့ အသံတော့ သိပျမထှကျတော့ဘူး…။ ဖငျကွီးက အနောကျကို ပွနျကော့ကော့ပေးလာတယျ..။ ကနြျောလညျး လိုးလိုးခငျြးတုနျးက သူ့ကို ဖီးလျတှတေကျပွီး တကျခနြပေမေယျ့ အရှိနျရလာတော့ မနကျက စျောကွီးကို မကျြလုံးထဲ ပွနျမွငျလာတယျ..။ အဲဒါနဲ့ အာရုံက အဲဒီစျောကွီးဆီရောကျသှားတော့ ညီလေးက ပိုတငျးလာတယျ ပိုမတျလာတယျ..။
အဲ့ဒါနဲ့ အဲဒီစျောကွီးကို မှနျးပွီး ကသေရီကို အားရပါးရ ဗငျြးတာ တဖုနျးဖုနျးတောငျမွညျတယျ..။ ကသေရီလညျး တအငျ့အငျ့နဲ့ ဖီးလျတှတေကျလာတာလားမသိဘူး..။ သူ့ အဖုတျထဲက အဖွူတှကေ ကနြေျာ့အတံမှာ ကပျ ကပျပါလာသလို အထဲက ညှဈညှဈပေးနတေယျ..။ ကသေရီ အဖုတျက ညှဈပေးလေ ကနြျောက နငျးကနျ ဆောငျ့လနေဲ့ ကနြျောကလညျး မနကျက စျောကွီးက ကနြေျာ့ကို စိတျလိုလကျရ ကုနျးနတေယျလို့ သဘောထားပွီး တအား ဆောငျ့ဆောငျ့ထညျ့တာ…။ ကသေရီရဲ့ အဖုတျကလညျး ကနြျောအတံကို နှဈဖကျလုံးက ညှပျထားသလို အားက ပွငျးလာတော့ ဒဈထိပျတှပေါ ကြိနျးလာတယျ..။ နောကျဆုံး ဘယျလိုမှ မခံနိုငျတဲ့အဆုံး ညီလေးက အရညျတှေ အားပါးတရ ပနျးထှကျသှားတယျ…..။ အရသာကတော့ ဘာကောငျးသလဲ မပွောနဲ့…။
ကသေရီ့ အဖုတျထဲ စိမျထားရငျး မကျြလံးမှိတျပွီး အရညျတှကေို ရသလောကျ ညှဈထုတျနမေိတယျ..။ အခုဆို ကသေရီလညျး ကုတငျစောငျးမှာ ကုနျးတာတကနေ မှရေ့ာနဲ့ ရငျဘတျကို အပျပွီး ဖငျကွီးထောငျထားတဲ့ပုံနဲ့ အနားယူနပေမေယျ့ သူ့အဖုတျက ဇှိဇှိနဲ့ ညှဈညှဈပေးနတေုနျး..။ သူ့ဖငျကွီးနဲ့ ကနြေျာ့ပေါငျနဲ့ ကပျပွီး အထဲမှာ အညှဈခံရငျး စိမျထားတာ ရှယျဘဲဗြာ..။ စိတျကူးထဲမှာတော့ အောကျမှာကုနျးနတောက မနကျက စျောကွီးဘဲ…။ စိမျလို့ အားရတော့မှ အတံကို ဆှဲထုတျလိုကျတော့ ကသေရီ အဖုတျထဲကနေ ဗွဈဆို ထှကျလာတယျ..။ ဟိုကျ…ကှနျဒှနျက ဘယျကနေ ဘယျလို ပေါကျသှားလညျး မသိဘူး….စောကျပွဿနာဘဲ…။
အဲဒါနဲ့ ကှနျဒှနျကို မွနျမွနျခြှတျ အမှိုကျပုံးထဲ လှငျ့ပဈပွီး ရခြေိုးခနျးထဲ တဈခါတညျး တနျးပွေးရတယျ…။ ကသေရီလညျး အနောကျကနေ လိုကျလာပွီး… “အကိုကွီး…ဘာဖွဈလို့လဲ…” “အစှပျပေါကျသှားလို့…” “ဟငျ..ဟုတျလား…ဒုက်ခပါဘဲ..” “နငျ သနျ့တော့ သနျ့ပါတယျနျော…” “အာ..ကိုကွီးကလညျး သနျ့ပါတယျ..ဘာရောဂါမှ မရှိဘူး..” ဘာဘဲဖွဈဖွဈ လူကတော့ ဆိုကျကို ဝငျသှားပွီ…။ ညီလေးကလညျး ခကျြခငျြးညှိုးကသြှားလိုကျတာ ခုနက သူ မဟုတျတဲ့အတိုငျးဘဲ…။ နှဈယောကျလုံး ဆေးကွောသနျ့စငျပွီးတော့ ကုတငျပျေါမှာ လှဲနလေိုကျတယျ…။
ကသေရီက ကနြေျာ့ ရငျဘတျကို ခေါငျးအုံးပွီး စောငျလေးခွုံလို့…။ ကနြျောကတော့ အဲကှနျးခနျးထဲမှာ တဈယောကျတညျး ခြှေးပွနျနတေယျ..။ မနကျက စျောကွီးလညျး အတှးထဲမှာ မရှိတော့ဘူး။ ရောဂါမြား ကူးနမေလားဆိုတဲ့ ဆိုကျကိုကွီးက လူကို ခွောကျလှနျ့နတေယျ..။ ကိုယျ ခလြိုကျတဲ့ မိနျးမ က သနျ့တယျလို့ ပွောပမေယျ့ သူက တကယျတမျးတော့ ကွေးစားဘဲလေ…။ ယတိပွတျကွီး ပဈယုံလို့လညျး မရဘူး..။ အခုက ဘာဘဲပွောပွော ရောဂါကူးစရာရှိရငျ ကူးနနေိုငျတဲ့ အနအေထား..။ တကယျလို့မြား ရောဂါကူးလို့ကတော့…….။ ကသေရီကလညျး ရိပျမိတယျ ထငျတယျ..။ ကနြေျာ့ ဗိုကျက အမှေးလေးတှကေို ပှတျရငျး သူ ဘယျလောကျသနျ့တဲ့ အကွောငျး သှယျဝိုကျပွီး တတှတျတှတျ ပွောနတေယျ…။
သူက ဘယျလောကျ ပွောပွော စိတျသကျသာရာနဲနဲတော့ ရပမေယျ့ လူက လနျ့နပွေီ…။ ကသေရီ အဖုတျအတှငျးသားတှကေညျး ကနြေျာ့ အတံကို ညှပျထားလိုကျတာ ပွတျထှကျတော့မယျ့ အတိုငျး…..ကတျကွေးကွနတောဘဲ..။ ကတျကွေးဆိုမှ ငယျငယျတုနျးက အဖွဈကို သတိရမိတယျ..။ တဈခါတော့ အဈမက အပျခြုပျနတေုနျး အမကေ ဘေးနားမှာထိုငျပွီး အင်ျကြီတဈထညျကို ကွယျသီးတှတေပျနတေယျ..။ ကနြျောလညျး ဘာရယျမဟုတျ သှားစပျစုရငျး သံနဲ့လုပျထားတဲ့ ကတျကွေးတဈလကျကို သှားတှတေ့ယျ..။ ကတျကွေးမှာလညျး စာလုံးတှကေို အစကျ အစကျလေးတှနေဲ့ ထှငျးထားသေးတယျ..။
ကြောငျးတတျခါစ အရှယျဆိုတော့ စာလုံးတှကေို ပေါငျးမဖတျတတျသေးဘူး..။ “အမေ ဒါဘာရေးထားတာလဲ…?” “ဟဲ့..သား…အမကေို့ ပေးစမျး…။ နောကျခါ မကိုငျရဘူးနျော…။ အဲ့ဒီမှာရေးထားတာ မကှေးကတျကွေးတဲ့..။ ညှပျလိုကျလို့ကတော့ တိခနဲဘဲ..ကလေးတှေ ကိုငျရငျ အန်တရယျရှိတယျ..အမကေို့ ပေး…….” အမကေ ကတျကွေးကို ကနြေျာ့လကျထဲက ယူပွီး အဈမကို အပျခြုပျစကျအောကျက အံဆှဲလေးထဲ ထညျ့ခိုငျးလိုကျတယျ။
နောကျပိုငျး ကနြျော အပျခြုပျစကျနားရောကျတိုငျး အမနေဲ့ အဈမက ကတျကွေးကို ကနြျော မယူကိုငျမိအောငျ သတိထားပွီး အပျခြုပျစကျအံဆှဲထဲ ထညျ့ထညျ့ထားတော့တာဘဲ…။ ကနြျောလညျး မကှေးကတျကွေးအကွောငျး သတိရသှားရငျး ကသေရီ့ ပုခုံးကို လှမျးဖကျလိုကျပွီး… “ကသေရီ..နငျ့ဇာတိက ဘယျကလဲ..” “ရစေကွိုဘကျက ကိုကွီး…ဘာလို့လဲ..” ဟိုကျ……။ ကနြျောကတော့ ရနျကုနျပွနျရောကျတာနဲ့ ဆရာဝနျနဲ့ တိုငျပငျပွီး ကာလသားရောဂါ အရငျ ပွေးစဈရတယျ..။
အဖွလှော ထုတျထုတျကွညျ့ခငျြး လူက လကျတှတေောငျ တုနျတယျ..။ တျောသေးတယျ ရောဂါမရှိလို့…။ အိတျချြအိုငျဗီ စဈဖို့တော့ ကနျြသေးတယျ..။ အဲဒီ အတှကျလညျး စိတျပူနရေတုနျးဘဲ..။ ဒီကွားထဲ ဟိုစျောကွီးရဲ့ ရုံးက ဆကျသှယျလာလို့ အဲဒီရုံးကို သှားရသေးတယျ..။ ပွောခငျြတာကတော့ ခငျဗြားတို့လညျး စျောခရြငျ သတိထားကွဗြာ..။ ကှနျဒှနျတှကေ ဘယျလောကျကောငျးတယျပွောပွော အခနျ့မသငျ့ရငျ ပေါကျပွဲတတျတယျ..။ ဒါပါဘဲ..။
ကျနော် ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့ဗျာ..။ ကျနော့် အိမ်မှာ အပ်ချုပ်စက်လေးတစ်လုံး ရှိတယ်ဗျ..။ အရင်တုန်းက ရယ်ဒီမိတ်တွေထက် ချုပ်ဝတ်ကြတဲ့ခေတ်ဆိုတော့ အမေက ကိုယ်တိုင်လည်းချုပ်တတ်နေတော့ စက်ဆိုင် မအပ်တော့ဘဲ ကိုယ်တိုင်ချုပ်တယ်။ အစ်မလည်း အစက ဘေးကဝိုင်းကူရင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူလည်း ကိုယ်တိုင် ချုပ်တတ်သွားတယ်..။ ဆိုတော့ကာ အပ်ချုပ်စက်လေးက အမေက သုံးလိုက် အစ်မက သုံးလိုက်နဲ့ အိမ်လေးထဲမှာ ဂျောက်ဂျက် ဂျောက်ဂျက်နဲ့ နေ့တိုင်းနီးပါး မြည်နေတတ်တယ်။ ကျနော်ကလည်း ချာတိတ်ပေါက်စအရွယ်ဆိုတော့ အဲဒီ ဂျောက်ဂျက် ဂျောက်ဂျက်မြည်သံကြီးကို စိတ်ဝင်စားပြီး အမေနဲ့ အစ်မတို့ အဝတ်ချုပ်နေတိုင်း အပ်ချုပ်စက်နားမှာ ရှိနေတတ်တယ်..။ အပ်ချုပ်စက်ရဲ့ ခြေနင်းကို နင်းလိုက်တိုင်း ဘေးက အဝိုင်းကြီးလည်နေတာကို ကြည့်ပြီးလည်း သဘောတွေကျလို့….။
နောက်ပိုင်းလည်းကျရော အဖေက အရုပ်တွေ ခဏခဏဝယ်ပေးတော့ အာရုံက အရုပ်တွေဆီမှာဘဲ ရှိတော့တယ်..။ ဂျောက်ဂျက်ဂျောက်ဂျက် မြည်ပြီး အဝိုင်းကြီးလည်လည်နေတဲ့ အပ်ချုပ်စက်နား သိပ်မရောက်ဖြစ်တော့ဘူး..။ ကျနော်လည်း ကျောင်းတွေပြီးလို့ အလုပ်တွေလုပ်လိုက် အခွင့်အရေးပိုကောင်းတဲ့ အလုပ်ပြောင်းလိုက်နဲ့ အခုပြောင်းလာတဲ့ အလုပ်က နေပြည်တော်ကို ခဏခဏသွားရတယ်..။ နေပြည်တော်မှာ ရုံးခွဲရှိပေမယ့် ရုံးထိုင်ပေးမယ့် လူမရှိတော့ တစ်လ တစ်ခါလောက် ကိုယ်စားသွားသွားနေပေးရတယ်..။ ရုံးက နဲနဲကပ်စေးကျတော့ ရုံးကားလည်းမပေးဘူး..။ အမြဲတမ်း အဝေးပြေးကားကြီးတွေနဲ့ဘဲ ခရီးထွက်ရတယ်..။ နေပြည်တော်ရောက်မှ အဲဒီရုံးက ကားကို ယူသုံးရတယ်..။ ပြီးတော့ ရုံးခွဲက နေပြည်တော်မှာ ဆိုပေမယ့် တည်းရမယ့် ဟိုတယ်က ပျဉ်းမနားမြို့ထဲမှာဆိုတော့ ဆင်ရုပ်ကြီးနားမှာ ဆင်းပြီး ဟိုတယ်ကို အေးအေးဆေးဆေး လမ်းလျှောက်နေကျ..။ အခုတစ်ခေါက်လည်း လမ်းလျှောက်ပြီး ဟိုတယ်ကို သွားနေတုန်း ဘေးနားကို ကားတစ်စီးက အရှိန်ဖြေးဖြေးလေးနဲ့ ကပ်လာတယ်..။
ကားမောင်းသူဘက်က ကားမှန်အနက်ရောင်လေးက အောက်ကို လျှောကျသွားပြီး…. “မောင်လေး…နှင်းဆီအဝိုင်းကို ဒီကနေ ဘယ်လိုသွားရလဲ ??” အသံပိုင်ရှင်ကို စူးစမ်းလိုက်တော့ မိန်းမတစ်ယောက်….။ ရုပ်ကသိပ်တော့မလှပေမယ့် ဆွဲဆောင်မှုတော့ရှိတယ်…။ နှာတံစင်းစင်း ပါးဖောင်းဖောင်း မေးချွှန်ချွှန်လေးနဲ့ နှုတ်ခမ်းလေးက တွဲတွဲလေး… မိတ်ကပ်ကာလာ သိပ်မပါတဲ့ မျက်နှာက နည်းနည်း ဆက်ဆီ တော့ ဖြစ်တယ်…။ “မောင်လေး သိလား…” သူ့မျက်နှာကို သရုပ်ခွဲနေတဲ့ ကျနော့်ကို အသိပေးသလို ထပ်မေးလိုက်မှ ကျနော်လည်း လိုရင်းကိစ္စအပေါ် အာရုံပြန်ရောက်တော့တယ်။ သူက အကူအညီတောင်းတဲ့သူဆိုတော့ မျက်နှာလေးကို ပြုံးထားရှာတယ်..။ “ဒီကနေ ရှေ့ဆက်သွားပြီး ……..” “သြော်….သိပြီ ….” ကျေးဇူးဘဲ မောင်လေးလို့ပြောပြီး ထပ်ပြုံးပြသွားတဲ့ မျက်နှာလေးက ကားမှန်အနက်ရောင်နောက်ကို ရောက်သွားတဲ့အချိန် ကျနော်လည်း သူ့အပြုံးကို ငြိသွားတယ်..။ ကျနော့် ဖေးဘရိတ်ဖြစ်တဲ့ သွားတက်လေးတွေ သူ့မှာ ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်လေ..။
သူ မောင်းလာတဲ့ကားက ထွက်သွားပေမယ့် ကျနော်က လမ်းဘေးမှာ ကျန်နေခဲ့တုန်း…။ သူ့မျက်နှာလေးကို ပြန်မြင်ယောင်ရင်း အောက်က ညီလေးက ထောင်ထလာတယ်..။ မဖြစ်သေးပါဘူး….. လမ်းမအလယ်ကြီးမှာ ဘောင်းဘီခွတည့်တည့်က ဖုဖုဖောင်းဖောင်းနဲ့ လောင်တီးနေတာ လူတွေမြင်ကုန်ရင် ရှက်စရာ…။ လေကို ပါးစပ်ကနေ ခဏခဏမှုတ်ထုတ်လိုက်တော့မှ ညီလေးက ပြန်ကျတယ်။ အဲဒီတော့မှ ဟိုတယ်ကို ဆက်လျှောက်နိုင်တော့တယ်…။ ဟိုတယ်ရောက်တော့ အခန်းယူပြီး ခဏနားလိုက်တယ်။ ပြီးမှ ရေမိုးချိုးပြီး ရုံးကားကို လာကြိုခိုင်းလိုက်တယ်…။ ရုံးမှာ ဟိုလုပ်သည်လုပ်နဲ့ နေ့လည်ကျော်တော့မှ မနက်ကတည်းက ဘာမှ မစားရသေးမှန်း သတိထားမိတယ်…။
အဲဒါနဲ့ တစ်နေ့စာ ဖြတ်စရာရှိတာ ဖြတ်ပေးပြီး ရုံးကားပါတစ်ခါတည်းယူရင်း ရုံးဆင်းခဲ့လိုက်တယ်..။ သပြေကုန်းဘက်က ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ စားသောက်ပြီး ဈေးထဲက ညီဝမ်းကွဲ ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ကို ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်..။ သူက ပျဉ်းမနားသူနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး သပြေကုန်းဈေးထဲမှာ ပျဉ်းမနားလက်ဆောင်နဲ့ ကုန်စုံဆိုင်ကြီး ဖွင့်ပြီး အခြေကျနေလေရဲ့…။ သူနဲ့ ထွေရာလေးပါး စကားပြောနေတုန်း ဈေးဝယ်တွေရောက်လာတော့ ညီဝမ်းကွဲက ဈေးထရောင်းတယ်..။
အဲဒီအချိန်မှာဘဲ ကောင်မလေး သုံးယောက် ဆိုင်ရှေ့ကို ထပ်ရောက်လာပြီး ဟိုဟာ ဒီဟာ လက်ညှိုးထိုးပြီး မုန့်တွေ မှာနေတော့ ညီဝမ်းကွဲက လက်မလည်တော့ဘူး…။ ကျနော်လည်း မနေနိုင်တော့တာနဲ့ ဈေးကူရောင်းပေးလိုက်တယ်…။ ကောင်မလေးတွေ ဝယ်တာ တော်တော်များတယ်…။ ကြက်သွန်ပေါင်းကြော်ထုပ်တွေ နဲတာမဟုတ်ဘူး..။ နန်းစိန်ကိတ်တွေလည်း အများကြီးဘဲ..။ လာဝယ်တဲ့ကောင်မလေးတွေကလည်း ခပ်မိုက်မိုက် ဆယ်ကျော်သက် ၁၇ ၁၈ အရွယ်လေးတွေ…။ ညီဝမ်းကွဲက ပြန်ရောင်းဖို့လား မေးတော့ မဟုတ်ဘူး လက်ဆောင်ပေးဖို့လို့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်က ပြန်ဖြေတယ်..။
ပိုက်ဆံလည်း ရှင်းပြီးရော မုန့်တွေ တအားများတော့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ကားပါကင်ဘက်ကို ပြန်ထွက်သွားပြီး ပြန်လာတော့ အဖော်တစ်ယောက်ထပ်ပါလာတယ်…။ ကောင်မလေးနဲ့ ပါလာတဲ့ တစ်ယောက်ကို ကျနော် မြင်လိုက်တော့ ဟတ်ခနဲ စိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်…။ ခင်ဗျားတို့ တွေးမိတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ မနက်က ကျနော့်ကို လိင်စိတ်ကြွစေခဲ့တဲ့ ဆက်ဆီ မျက်နှာပိုင်ရှင်..။ အခုတစ်ခေါက် ထပ်မြင်လိုက်ရတော့လည်း စိတ်တွေက ပြန်ကြွချင်လာတယ်။ တကယ့် အဖြစ်အပျက်တွေက တစ်ခါတစ်လေ ဇာတ်လမ်းဆန်တတ်တာကို ကျနော် လုံးဝ လက်မခံခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ တကယ်ဖြစ်နေပြီ…။ ကံကြမ္မာက ကျနော့်ကို ကျီစားနေပြီလား မသိဘူး…။ ကျနော်လည်း မုန့်တွေကို အိတ်တွေနဲ့သာ ထုပ်ပေးနေတာ အကြည့်တွေက သူ့ဆီ ရောက်ရောက်နေတယ်..။
မျက်နှာက ဆက်ဆီ ကျသလို ကိုယ်လုံးကလည်း လုံးဝအကိတ်..။ ခွန်းဆင့်နေခြည်လို ဘော်ဒီမျိုး…။ တင်သားကြီးတွေက အနောက်ကို ကော့ပြီး ကောက်နေတာ ရှယ်ဗျာ..။ အပေါ်က အဖြူရှပ် အပွကို ဝတ်ထားတော့ ရင်သားတွေက သိပ်မသိသာပေမယ့် ဆိုဒ်ကြီးမယ့်ပုံဘဲ…။ ခက်တာက အဲ့ဒီ အမျိုးသမီးက ကျနော့်ကို မှတ်မိပုံ မပေါ်ဘူး…။ ဒါနဲ့ မုန့်တွေ ထည့်ထားတဲ့ အိတ်ကို သူ့ကို ကမ်းပေးရင်း ကျနော်လည်း ပြုံးပြလိုက်ပြီး “အစ်မ..မနက်က ကျနော် လမ်းပြောပြလိုက်တာ အဆင်ပြေလားဗျ…” အဲဒီတော့မှ သူ့မျက်လုံးက ဝိုင်းသွားပြီး အံ့သြသွားတဲ့ အမူအရာနဲ့ ကျနော့်ကို မှတ်မိသွားတယ်..။
“သြော် အဟင်း.. အဆင်ပြေတယ် မောင်လေး..။ ဒါက မောင်လေး ဆိုင်လား ?…” “မဟုတ်ဘူး အမ..။ ကျနော့် ဝမ်းကွဲ ဆိုင်ပါ…။ ကျနော်က ရန်ကုန်ကပါ…နေပြည်တော်မှာ ရုံးကိစ္စရှိလို့…ကျနော့်နာမည်..…….” နာမည်ဘာညာ မိတ်ဆက်ပြီးတော့ လိပ်စာကဒ်လေး ထုတ်ပေးလိုက်တယ်…။ ကဒ်ကို တစ်ချက် ကြည့်လိုက်ပြီး “…… တွေ လုပ်တာလား…. အမတို့ ရုံးက ရန်ကုန်မှာလည်း ရှိတယ်..” “ဟုတ်ကဲ့ အမ…. အမတို့ ရုံးမှာ လိုအပ်ရင် ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ…အဆင်ပြေအောင် စီစဉ်ပေးပါ့မယ် …..” ဘာညာကွိကွ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ စကားတွေပြောပြီး သူလည်း အထုပ်တွေဆွဲပြီး ကားပါကင်ကို ပြန်သွားတယ်..။ အဲ့ဒီ အမက ကျနော့် ကဒ်သာ ယူသွားတာ သူ့ ကဒ်ကျတော့ ပြန်မပေးသွားဘူး..။ ရုံးက လူတွေကို ဆက်သွယ်ခိုင်းလိုက်မယ်ဘဲ ပြောသွားတယ်..။
အခုထိ နာမည်တောင် မသိလိုက်ရပေမယ့် အဲ့ဒီအမရဲ့ နောက်ပိုင်း အလှနဲ့တင် တော်တော်ကို တန်ပါတယ်ဗျာ…။ ကားပါကင်ဘက်ကို ပြန်သွားတဲ့ အချိန် လမ်းလျှောက်သွားတိုင်း တင်ပါးကြီးတွေက ငြိမ့်ခနဲ ငြိမ့်ခနဲ လှုပ်လှုပ်သွားတာ အနားပြေးကပ်ပြီး အားရပါးရ ညှစ်ပစ်ချင်စိတ်တွေတောင်ပေါက်တယ်..။ ဒါမျိုး စော်ကြီးကို ဖြည်လိုက်ရရင်တော့ ပျစ်နှစ်နေမှာဘဲ…။ ကာမပိုင် ရှိမှန်းမသိ မရှိမှန်းမသိ အားပါးတရ ပြစ်မှားလို့ ဝတော့မှ ဆိုင်ထဲကို ပြန်ဝင်လာတော့ ညီဝမ်းကွဲက စပ်ဖြီးဖြီးနဲ့ မျက်ခုံးပင့်ပြပြီး… “တောင့်တယ်နော်….” “အင်း…တော်တော် တောင့်တယ်…” ခက်တော့တာဘဲ…. စိတ်က ခုနက စော်ကြီးဆီဘဲ ရောက်ရောက်နေတယ်…။ တစ်ခါမှ ဒီလို မဖြစ်ဖူးသေးဘူး…။ ရည်းစားလည်း ထားဖူးတယ်…။
စော်တွေလည်း ဖြုတ်ဖူးသားနဲ့ ဒီမိန်းမနဲ့ကျမှ ဘယ်လို ဖြစ်တယ်ကို မသိဘူး..။ သူ့ကို တွေ့ရင် စိတ်တွေက ထထ လာတယ်..။ မယုံမရှိနဲ့ဗျ….ခင်ဗျားတို့ အပြင်မှာ တကယ်တွေ့ရင် ကျနော်လိုဘဲ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကြိမ်းသေတယ်..။ ဟိုတယ်ကို ပြန်လာရင်း ကားမောင်းလာတော့လည်း မျက်လုံးထဲ စော်ကြီးကိုဘဲ မြင်မြင်နေတယ်…။ အသားက အဖြူကြီး မဟုတ်ပေမယ့် ဝါဝါဝင်းဝင်းလေး…။ ဘော်ဒီအချိုးအစားကလည်း ပြစ်ပြက်လုပ်ပစ်လိုက်ရင်တောင် တောင့်ခံနိုင်တဲ့ အမျိုးအစား…။
ဟူးး မဖြစ်တော့ဘူး ဓါတ်ကြမ်းတိုက်မှ ဖြစ်မယ်…။ စားလည်း ဒီစိတ် သွားလည်း ဒီစိတ်နဲ့ဆို ကြာရင် ခက်မယ်…။ ဖုန်း contact ထဲက နာမည်တစ်ခုကို နှိပ်ရင်း ဖုန်းခေါ်လိုက်တော့ ဟိုဘက်က ဖုန်းချက်ချင်း လှမ်းကိုင်တယ်..။ “ဟဲလို…ကိုကြီး…ရောက်နေပြီလား” “၉နာရီလောက် လာခဲ့မယ်…” “အင်း…မျှော်နေမယ်နော် ကိုကြီး…..” ဟိုတယ်ပြန်ရာက်တော့ ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တာနဲ့ ဂွင်းတစ်ချီထုပြီး တစ်ရေးအိပ်လိုက်တယ်…။ တစ်ရေးအိပ်ပြီး နိုးလာတာနဲ့ ရေချိုး အဝတ်အစားလဲပြီး ခုနက ဖုန်းကိုင်တဲ့ ကောင်မလေးဆီ ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်…။ သူ့ နာမည်က ကေသရီ…။ အသားညိုညိုနဲ့ ရင်သားတွေ ထွားသလောက် ခါးက သိမ်သိမ်လေးနဲ့ အပေးအရမ်းကောင်းတယ်…။ နေပြည်တော်ကို စစရောက်ချင်း နှစ်ခေါက်လောက်မှာ နယ်ခံ တစ်ယောက်က ချိတ်ပေးတာ…..။ နောက်ပိုင်း ကျနော်လည်း သူ့ဆီမှာ ခဏခဏ အားပေးဖြစ်တော့ ဖုန်းနံပါတ်တောင် အလွတ်ရနေပြီ…။
ကေသရီနေတဲ့ လမ်းထိပ်ရောက်တော့ သူက ထွက်စောင့်နေတယ်…။ အဲဒါနဲ့ သူ့ကို ကားပေါ်ခေါ်တင်ပြီး ဟိုတယ်ကို ပြန်မောင်းလာခဲ့တယ်..။ ကားပေါ်မှာ ကေသရီရဲ့ ရေမွှေးနံ့က မွှေးနေတာဘဲဗျာ..။ ကားမောင်းရင်း ကေသရီကို လှည့်ကြည့် လှည့်ကြည့်နဲ့ ညီလေးက မတ်လာရော..။ ဘေးတိုက် မြင်နေရတော့ ကေသရီရဲ့ နို့အုံ ထွားထွားကြီးက ဖြစ်ညှစ်ချင်စိတ်တွေ တားမရဆီးမရဘဲ။ မနေနိုင်တော့တာနဲ့ ကေသရီ လက်ကို ယူပြီး ညီလေးပေါ် တင်ထားခိုင်းလိုက်တယ်…။ ကေသရီကလည်း အလိုက်သိပါတယ် တစ်လမ်းလုံး ဖြည်းဖြည်းလေး ဂွင်းတိုက်လာပေးတယ်…။ သူက ညီလေးကို ချော့လေ စိတ်တွေက ကြွလာလေနဲ့ လီဗာကို ခင်ပြင်းပြင်းနင်းပြီး ဟိုတယ်ကို ရောက်အောင် ခပ်မြန်မြန်လေး မောင်းလိုက်တယ်…။ ဟိုတယ် အခန်းထဲ ရောက်တာနဲ့ လူက လုံးဝ မထိန်းနိုင်တော့ဘူး..။ ကေသရီကို အတင်း ဖက်နမ်းပြီး ကုတင်စောင်းမှာ လေးဘက်ကုန်းခိုင်းလိုက်တယ်…။
ခရီးဆာင်အိတ်ထဲ အမြဲဆောင်ထားတဲ့ ကွန်ဒွန်ကို ခပ်မြန်မြန်လေး စွပ်ပြီးတာနဲ့ တစ်ခါတည်း တန်းထည့်လိုက်တာဘဲ..။ စစချင်း နဲနဲတော့ ကြပ်ပေမယ့် လူက မွှန်နေတော့ ခပ်သွက်သွက်ဘဲ ဆောင့်လိုက်တယ်…။ ကေသရီကတော့ စစချင်း မနှူးဘဲ တန်းထည့်လိုက်လို့လားမသိဘူး..။ နာလို့ထင်တယ် မွေ့ရာခင်းကို လက်နဲ့ ဆုပ်ထားရင်း တအားအား အော်နေတယ်..။ နောက်ပိုင်း အချက်ရေ များလာတော့ အသံတော့ သိပ်မထွက်တော့ဘူး…။ ဖင်ကြီးက အနောက်ကို ပြန်ကော့ကော့ပေးလာတယ်..။ ကျနော်လည်း လိုးလိုးချင်းတုန်းက သူ့ကို ဖီးလ်တွေတက်ပြီး တက်ချနေပေမယ့် အရှိန်ရလာတော့ မနက်က စော်ကြီးကို မျက်လုံးထဲ ပြန်မြင်လာတယ်..။ အဲဒါနဲ့ အာရုံက အဲဒီစော်ကြီးဆီရောက်သွားတော့ ညီလေးက ပိုတင်းလာတယ် ပိုမတ်လာတယ်..။
အဲ့ဒါနဲ့ အဲဒီစော်ကြီးကို မှန်းပြီး ကေသရီကို အားရပါးရ ဗျင်းတာ တဖုန်းဖုန်းတောင်မြည်တယ်..။ ကေသရီလည်း တအင့်အင့်နဲ့ ဖီးလ်တွေတက်လာတာလားမသိဘူး..။ သူ့ အဖုတ်ထဲက အဖြူတွေက ကျနော့်အတံမှာ ကပ် ကပ်ပါလာသလို အထဲက ညှစ်ညှစ်ပေးနေတယ်..။ ကေသရီ အဖုတ်က ညှစ်ပေးလေ ကျနော်က နင်းကန် ဆောင့်လေနဲ့ ကျနော်ကလည်း မနက်က စော်ကြီးက ကျနော့်ကို စိတ်လိုလက်ရ ကုန်းနေတယ်လို့ သဘောထားပြီး တအား ဆောင့်ဆောင့်ထည့်တာ…။ ကေသရီရဲ့ အဖုတ်ကလည်း ကျနော်အတံကို နှစ်ဖက်လုံးက ညှပ်ထားသလို အားက ပြင်းလာတော့ ဒစ်ထိပ်တွေပါ ကျိန်းလာတယ်..။ နောက်ဆုံး ဘယ်လိုမှ မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ညီလေးက အရည်တွေ အားပါးတရ ပန်းထွက်သွားတယ်…..။ အရသာကတော့ ဘာကောင်းသလဲ မပြောနဲ့…။
ကေသရီ့ အဖုတ်ထဲ စိမ်ထားရင်း မျက်လံးမှိတ်ပြီး အရည်တွေကို ရသလောက် ညှစ်ထုတ်နေမိတယ်..။ အခုဆို ကေသရီလည်း ကုတင်စောင်းမှာ ကုန်းတာတကနေ မွေ့ရာနဲ့ ရင်ဘတ်ကို အပ်ပြီး ဖင်ကြီးထောင်ထားတဲ့ပုံနဲ့ အနားယူနေပေမယ့် သူ့အဖုတ်က ဇွိဇွိနဲ့ ညှစ်ညှစ်ပေးနေတုန်း..။ သူ့ဖင်ကြီးနဲ့ ကျနော့်ပေါင်နဲ့ ကပ်ပြီး အထဲမှာ အညှစ်ခံရင်း စိမ်ထားတာ ရှယ်ဘဲဗျာ..။ စိတ်ကူးထဲမှာတော့ အောက်မှာကုန်းနေတာက မနက်က စော်ကြီးဘဲ…။ စိမ်လို့ အားရတော့မှ အတံကို ဆွဲထုတ်လိုက်တော့ ကေသရီ အဖုတ်ထဲကနေ ဗြစ်ဆို ထွက်လာတယ်..။ ဟိုက်…ကွန်ဒွန်က ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ပေါက်သွားလည်း မသိဘူး….စောက်ပြဿနာဘဲ…။
အဲဒါနဲ့ ကွန်ဒွန်ကို မြန်မြန်ချွတ် အမှိုက်ပုံးထဲ လွှင့်ပစ်ပြီး ရေချိုးခန်းထဲ တစ်ခါတည်း တန်းပြေးရတယ်…။ ကေသရီလည်း အနောက်ကနေ လိုက်လာပြီး… “အကိုကြီး…ဘာဖြစ်လို့လဲ…” “အစွပ်ပေါက်သွားလို့…” “ဟင်..ဟုတ်လား…ဒုက္ခပါဘဲ..” “နင် သန့်တော့ သန့်ပါတယ်နော်…” “အာ..ကိုကြီးကလည်း သန့်ပါတယ်..ဘာရောဂါမှ မရှိဘူး..” ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် လူကတော့ ဆိုက်ကို ဝင်သွားပြီ…။ ညီလေးကလည်း ချက်ချင်းညှိုးကျသွားလိုက်တာ ခုနက သူ မဟုတ်တဲ့အတိုင်းဘဲ…။ နှစ်ယောက်လုံး ဆေးကြောသန့်စင်ပြီးတော့ ကုတင်ပေါ်မှာ လှဲနေလိုက်တယ်…။
ကေသရီက ကျနော့် ရင်ဘတ်ကို ခေါင်းအုံးပြီး စောင်လေးခြုံလို့…။ ကျနော်ကတော့ အဲကွန်းခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း ချွေးပြန်နေတယ်..။ မနက်က စော်ကြီးလည်း အတွးထဲမှာ မရှိတော့ဘူး။ ရောဂါများ ကူးနေမလားဆိုတဲ့ ဆိုက်ကိုကြီးက လူကို ခြောက်လှန့်နေတယ်..။ ကိုယ် ချလိုက်တဲ့ မိန်းမ က သန့်တယ်လို့ ပြောပေမယ့် သူက တကယ်တမ်းတော့ ကြေးစားဘဲလေ…။ ယတိပြတ်ကြီး ပစ်ယုံလို့လည်း မရဘူး..။ အခုက ဘာဘဲပြောပြော ရောဂါကူးစရာရှိရင် ကူးနေနိုင်တဲ့ အနေအထား..။ တကယ်လို့များ ရောဂါကူးလို့ကတော့…….။ ကေသရီကလည်း ရိပ်မိတယ် ထင်တယ်..။ ကျနော့် ဗိုက်က အမွှေးလေးတွေကို ပွတ်ရင်း သူ ဘယ်လောက်သန့်တဲ့ အကြောင်း သွယ်ဝိုက်ပြီး တတွတ်တွတ် ပြောနေတယ်…။
သူက ဘယ်လောက် ပြောပြော စိတ်သက်သာရာနဲနဲတော့ ရပေမယ့် လူက လန့်နေပြီ…။ ကေသရီ အဖုတ်အတွင်းသားတွေကည်း ကျနော့် အတံကို ညှပ်ထားလိုက်တာ ပြတ်ထွက်တော့မယ့် အတိုင်း…..ကတ်ကြေးကြနေတာဘဲ..။ ကတ်ကြေးဆိုမှ ငယ်ငယ်တုန်းက အဖြစ်ကို သတိရမိတယ်..။ တစ်ခါတော့ အစ်မက အပ်ချုပ်နေတုန်း အမေက ဘေးနားမှာထိုင်ပြီး အင်္ကျီတစ်ထည်ကို ကြယ်သီးတွေတပ်နေတယ်..။ ကျနော်လည်း ဘာရယ်မဟုတ် သွားစပ်စုရင်း သံနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ကတ်ကြေးတစ်လက်ကို သွားတွေ့တယ်..။ ကတ်ကြေးမှာလည်း စာလုံးတွေကို အစက် အစက်လေးတွေနဲ့ ထွင်းထားသေးတယ်..။
ကျောင်းတတ်ခါစ အရွယ်ဆိုတော့ စာလုံးတွေကို ပေါင်းမဖတ်တတ်သေးဘူး..။ “အမေ ဒါဘာရေးထားတာလဲ…?” “ဟဲ့..သား…အမေ့ကို ပေးစမ်း…။ နောက်ခါ မကိုင်ရဘူးနော်…။ အဲ့ဒီမှာရေးထားတာ မကွေးကတ်ကြေးတဲ့..။ ညှပ်လိုက်လို့ကတော့ တိခနဲဘဲ..ကလေးတွေ ကိုင်ရင် အန္တရယ်ရှိတယ်..အမေ့ကို ပေး…….” အမေက ကတ်ကြေးကို ကျနော့်လက်ထဲက ယူပြီး အစ်မကို အပ်ချုပ်စက်အောက်က အံဆွဲလေးထဲ ထည့်ခိုင်းလိုက်တယ်။
နောက်ပိုင်း ကျနော် အပ်ချုပ်စက်နားရောက်တိုင်း အမေနဲ့ အစ်မက ကတ်ကြေးကို ကျနော် မယူကိုင်မိအောင် သတိထားပြီး အပ်ချုပ်စက်အံဆွဲထဲ ထည့်ထည့်ထားတော့တာဘဲ…။ ကျနော်လည်း မကွေးကတ်ကြေးအကြောင်း သတိရသွားရင်း ကေသရီ့ ပုခုံးကို လှမ်းဖက်လိုက်ပြီး… “ကေသရီ..နင့်ဇာတိက ဘယ်ကလဲ..” “ရေစကြိုဘက်က ကိုကြီး…ဘာလို့လဲ..” ဟိုက်……။ ကျနော်ကတော့ ရန်ကုန်ပြန်ရောက်တာနဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ကာလသားရောဂါ အရင် ပြေးစစ်ရတယ်..။
အဖြေလွှာ ထုတ်ထုတ်ကြည့်ချင်း လူက လက်တွေတောင် တုန်တယ်..။ တော်သေးတယ် ရောဂါမရှိလို့…။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗီ စစ်ဖို့တော့ ကျန်သေးတယ်..။ အဲဒီ အတွက်လည်း စိတ်ပူနေရတုန်းဘဲ..။ ဒီကြားထဲ ဟိုစော်ကြီးရဲ့ ရုံးက ဆက်သွယ်လာလို့ အဲဒီရုံးကို သွားရသေးတယ်..။ ပြောချင်တာကတော့ ခင်ဗျားတို့လည်း စော်ချရင် သတိထားကြဗျာ..။ ကွန်ဒွန်တွေက ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ပြောပြော အခန့်မသင့်ရင် ပေါက်ပြဲတတ်တယ်..။ ဒါပါဘဲ..။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged အခနျ့မသငျ့ရငျ